Thwebula Bitdefender 2014 17.28.0.1191 Free... – Vessoft
Bitdefender – isofthiwe ukuthola nokususa amagciwane. Antivirus inikeza isivikelo malware, spyware, trojans, izimpethu, kanye nezinye izingozi. Bitdefender ikuvumela ukuhambisa amafayela onegciwane ngokuhlukaniswa, ukudala iphephabhuku imibiko yomsebenzi bese usetha scan yena system on schedule. Isofthiwe iqukethe module eyakhelwe-kulelo kwenza ukuvimba okuqukethwe engadingeki kanye nokuqapha imisebenzi online izingane. Bitdefender has umsebenzi update ngokuzenzekelayo yolwazi unqulo wesi arab ukunikeza umsebenzi ngempumelelo futhi uzinzile.
Okuzingela spyware module
Ukuvinjwa kokuqukethwe okungafunwa
Amazwana on Bitdefender:
Bitdefender Ahlobene software:
English, Español, Deutsch, 中文... SUPERAntiSpyware 6.0.1232 Free Edition futhi Professional
English, Español, Русский, Türkçe... Genymotion 2.6.0